Hayilamaariyaam Dassalenyi: Waggaa 2ffaan MM duraanii aangoo gadi dhiisan yoo yaadatamu - BBC News Afaan Oromoo
Hayilamaariyaam Dassalenyi: Waggaa 2ffaan MM duraanii aangoo gadi dhiisan yoo yaadatamu
Goodayyaa suuraa Ministira Mummee duraanii Obbo Haayilamaariyaa Dasaalanyi
Obbo Haayilamaariyaam TV'tti mul'achuun aangoo MM fi dura taa'aa ADWUI gadi dhiisu erga himanii har'a waggaa lammaffaa guutan.
Obbo Haayilamaariyaan MM duraanii Mallas Zeenaawii du'aan boqachuun walqabatee gara aangootti dhufuun biyyattii ogganuu kan eegalan Fulbaana ALI bara 2005'tti ture.
Isaan boodas MM ta'uudhaan gara waggoota jahaatiif biyyattii ogananii kan turan yoo ta'u, haala mormii biyyattii keessatti cimaa dhufeen wal qabatee aangoo gadhiisuuf ALI Guraandhala 8 bara 2010 ifatti gaafatan.
Sababii aangoo itti gadhiisuuf isaan kakaases ''qaama furmaataa ta'uu barbaadeen'' jechuun ture kan ibsan.
Akkuma yaadatamu tibba sanatti, moriin qeerroon eegalamee babal'atee gara naannoolee biraatti darbaa kallattiin eegeree biyyattii yaaduun haala itti rakkiseerra gahamee ture.
Haala ta'u malee Obbo Haayilamaariyaam foddaa TV'tti bahuun, dura taa'aa dhaaba naannoo isaanii gadhiisuuf gaaffiin dhiyeeffatan dhaabichaan fudhatama argachuu himan.
Itti aansaniis gaaffiin mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyeeffatanis kan fudhatamu ta'uu amantaa qaban dubatan.
Itti dabaluunis ''Manni mare ADWUI haala dimokraatawa ta'een nama bakka kiyya bu'uu ni filata jedheen amana.
Kanaanis kun yaroo dhaabniifi motummaan karaa nagaa ta'een aangoo wal harkaa fuudhuun seenaan itti hojjatamu jedheen amana'' jechuun dubbatanii ture.
Gochi kunis Obbo Haayilamaariyaan MM ofiin karaa nagaatiin aangoo dabarsanii kennan jedhamuun maqaansaanii akka ka'u dhimma taasiise ture.
Egaan kana booda ture dhaabbanni biyya bulchaa ture ADWUI carraa biyyatti gara fuula duraarratti kallattii haaraa kaa'uuf jecha, dura taa'aa filachuun tarkaanfii atattamaa kan fudhatan.
Kanaanis Dr Abiyiin gara fuula duraatti akka bahaniif kara bane.
Obbo Haayilamaariyaan hojiiwwan siyaasaa keessaa bahuun sochiilee akka adeemsa filannoo duree biyyoota biraa taajabuufi dhaabbilee miti motummaa ta'an keessatti hirmaachu itti fufan.
Dr Abiy ammo haala rakkisaa wayita gara aangootti dhufu biyyattiin keessa turte geeddaruuf adeemsa haaraa fi kaabinee haaraa iftuumsuutu irra ture.
Haaluma kanaanis gubbaa ADWUI irraa qabeen dhaabbilee siyaasaa arfan waliin ta'uun waggoota darba 27'f biyya bulchaa turan keessatti sochii riiformii cimaan akka taasifamu madda ta'e.
Dr Abiyi OPDO keessatti bakka Lammaa Magarsaa fudhachuun dura taa'aa paartii naannoo Oromiyaa bulchuu ta'uun, itti aansuunis dura taa'aa ADWUI ta'uuf filataman. Achinis MM biyyattii ta'uun bakka Obbo Haayilamaariyaan bu'uun paarlaamaan mudaman.
Haalli adeemsa filmaata Dr Abiy kunis sadarkaa naannootti Lammaa aangoorraa fageessuuf kan raawwatameedha jechuun komiin ka'aa turuulleen, Obbo Lammaan 'ummatatti bahuun lakkii walii galleetti.
Dhiibbaa gubbaa dhufu kan achitti nurraa qabu yoo argannee nuti misomarratti xiyyeeffachuun ummataaf hojjachu dandeenyaa' jechuun kanneen komii kaasan tasigabeessanii turan.
Isaan boodas ummanni hanga boombii MM Abiyiif aga'ameetti ofiin itti darbee waregamuutti jaalalaafi kabaja Abiyyiif qabu ibsate. Abbootii siyaasaa dabalatee kan dararaafi wareegama bara aangoo TPLF irraa lubbuun hafuun biyya alaatti baqatees gammachuun biyya abbaa isaa keessa nagaan jiraachuuf abdachuu deebii'ee galuun itti fufe.
Haa ta'u malees, osuma baayyee hinturiin himannaafi maqa balleessoon dhaaboolee Oromoo biyya alaatii galaniifi qeerroo fi qarree jijjirama argameef wareegama lubbuufi dhiigaa kanfalan irratti xiyyeeffate karaa adda addaatiin itti fufe.
Kunis oolee bulee gara walitti bu'iinsa saba bu'ureeffateetti geedaramuun ummattoonni waggota dheeraaf waliin jiraataa turan kumaatamni akka walirratti ka'uun buqqaafaman madda ta'e.
Haaluma kanaanis waggoota lamaan darban keessa jijjiramoonni jajjabeessoon sadarkaa addunyaatti beekamtii argatan MM Abiyiin raawwataman illeen, haalli nageenyaa biyyattii keessatti garuu danqaawwan riiformii Abiyiitti hidhaa ta'an hedduun mudataniiru.
Ajjeechaan qondaaltoota motummaa Naannoo Amaaraatti, ajjeechaan barattoota yunivarsiitii, walitti bu'iinsi sabootaa naannoo addaa addaafi dallansuun motummaa federaalaa fi naannoo Tigraayi jidduutti umaman qormaatawwan Abiy mudatan muummeedha.
Ammas wayita biyyattiin filannoo gaggeessuuf yaadaa jirtu kanatti haalli tasgabbii biyyattii keessatti mul'atu yaadeessa ta'u kan himan hedduudha.
Wayita sanattis Obbo Haayilamaariyaam aangoo karaa nagaatiin gadhiisuun rakkina biyyattii yeroo sana mudateef fala gahee ofii bahanii ture.
Ergasiin booda ammoo Obbo Haayila Maariyaan biyya keessaafi biyyaan alatti dhaabbilee miti mootummaa idil adhunyaa ta'an keessatti miseensa boordii ta'un filatamanii tajaajilaa jiru.
Fakkeenyaaf, waldaa 'Alliance for A Green Revolution In Africa'' jedhamu kan wabii nyaata qonnaan bultoota miliyoona 30 ta'anii kanneen biyyoota afriikaa 11 keessati argaman fooyyeessuuf irratti xiyyeeffatee hojatu keessatti miseensa boordii ta'uun hojjataa jiru.
Kana malees garee idil addunyaa walitti bu'iinsa addunyaa gutuutti umamuufi umamau malu hordofu 'International Crisis Group' keessattis miseensa boordii ta'uun hajjataa jiru.